आयरल्यान्डद्धारा नेपाल सामु १३२ रनको चुनौति
काठमाडौ, १६ माघ । बंगलादेशमा जारी आईसीसी यू-१९ विश्वकपमा आज नेपाल आयरल्यान्डसँग खेलिरहेको छ । टस जितेर ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले नेपाल सामू १३२ रनको चुनौति दिएको छ । निर्धारित ५० ओभरको खेलमा
इङ्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीसंग आर्सनल १–० पराजित
काठमाडौं, माघ ११ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा आर्सनल चेल्सीसंग १–० गोले पराजित भएको छ । आर्सनलको मैदानमा भएको खेलमा चेल्सीलाई महत्वपूर्ण जित दिलाउन डिएगो कोष्टाले २३ औं
‘गोल्डकप’ विजयी टोलीलाई एन्फाले ५ र राखेपले २ लाख दिने !
काठमाडौँ, ९ माघ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले बङ्गबन्धु कप विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई जनही रु पाँच÷पाँच लाख दिने घोषणा गरेको छ । रासससँग कुरा गर्दै एन्फाका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान
विमल र नवयुग बन्न सक्छन् रोनाल्डो र मेस्सी !
काठमाडौँ, ८ माघ । नेपालले २३ बर्षपछि अन्तराष्ट्रिय उपाधि जितेपछि नेपाली फुटबलमाथी लागेको कालो दाग विस्तारै हट्ने क्रममा छ । युवा खेलाडीले दिएको धोका र फितलो प्रदर्शनपछि फिफाकै र्यांकिङमा निकै तल परेको
२३ बर्षपछि नेपालले ‘बंगबन्धु गोल्डकप’ जित्यो
काठमाडौं, ८ माघ । २३ वर्षपछि नेपालको राष्ट्रिय टोलीले फुटबलमा पहिलो उपाधि जितेको छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा शुक्रबार बेलुकी भएको खेलमा बहराईनको २३ वर्ष मुनिको टोलीलाई ३–० ले हराउँदै नेपालले
कोहलीकै स्टाइलले १५ बर्षीय किशोरले तोडेको रेकर्ड
काठमाडौं, २२ पुस । विराट कोहलीको जस्तै गरी एक भारतीय व्याट्सम्यानले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै १००९ रन बनाएका छन् । मुम्बईको स्कुल क्रिकेटको यू १६ प्रतियोगितामा १५ वर्षका प्रणव धनावडेले ३२३ बलमा अविजित
रियल मड्रिडमा नयाँ प्रशिक्षक जिदान नियुक्त
काठमाडौँ, २२ पुस । रियल मड्रिडले प्रशिक्षक राफेल बेनिटेजलाई बर्खास्त गर्दै जिनेदान जिदान नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ । स्पेनका ५५ वर्षीय बेनिजेट रियल मड्रिडको प्रशिक्षक भएको सात महिनामा नै बर्खास्तीमा परेका
आईपीएलमा विराट कोहली सर्वाधिक महंगा
काठमाडौँ, १८ पुस । इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा सर्वाधिक महंगो खेलाडीका रुपमा विराट कोहली भएका छन् । आईपीएलले शनिबार क्रिकेटहरुको तलब सार्वजनिक गर्दा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरका कप्तान र भारतीय टिमकै उपकप्तान
सागले भारत र नेपालको दुरी घट्छ – मन्त्री मण्डल
काठमाडौं, १८ पुस । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अध्यक्ष एवम् युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले संविधान जारी भएपछि भारत र नेपालबीच रहेको केही दूरी १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)
काकडभिटा आमन्त्रण गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै
काकडभिटा, पुस १८ – काकडभिटा आमन्त्रण गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता आज काकडभिटामा सुरु हुँदैछ । प्रतियोगिताको उदघाटन खेलमा आज दिउँसो साढे २ बजे बिर्तामोड र डीसिटी सुनसरीबिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पुष